Ngaba ufuna ukuhlala endlwini apho izindonga zikunceda? Ukucoca indlu yeFeng Shui - into oyifunayo! Ekuboneni kokuqala kubonakala ukuba lo msebenzi olula, kuba emaninzi amakhaya indawo ephilayo iphela kumamitha ayi-square square. Kodwa iimitha ezinjalo ziyakwazi ukulungiswa kwi-feng shui kwaye zifunde indlela yokuhambisa amandla ngokufanelekileyo.
Ngokuqhelekileyo, kufuneka uhlambuluke emva kweveki. Nangona kungekho xesha, zama ukuhamba kuyo yonke ikona yegumbi, ukuze kungabi nkunkuma.
Lahla izinto ezisezantsi kunye nezinto ezindala
Ukuba indlu yakho ingahlambulukanga ixesha elide, ngoko kufuneka uyilungiselele kwaye ulahle izinto ezingadingekile. Aziyi kuba luncedo kuwe, ukuba ziyimfuneko, zazingenaso uthuli kumashalofu. Banike umntu okanye baphonsa kwingqotyana. Kwikheritom iya kuba yindawo enkulu yeengubo ezintsha. Iincwadi eziye zatshulisa iminyaka emininzi kwiithalafu kwaye ongazifundekanga ixesha elide zinganikwa kwiilayibrari nakwizikolo. Amathoyizi abantwana abaphene kunye nokuphosa ukuphosa, kunye nalawo umntwana angadlalayo, ahlambuluke. Xa ukhulula iikhabhinethi ezivela kwizinto ezingadingekanga, uzisa ubomi obomini.
Ungalondolozi kwiiplati ezityhutywayo, izitya, iikomityi. Iindwendwe zeNdlu, ezingabikho mntu uzinxibayo, kukuhlazola ukunikezela ngeendwendwe, kwaye ukuba ungafumani iifungus, kufuneka uhlaziye izicathulo zakho zasekhaya rhoqo. Ukuba endlini kukho ezinye izinto zabantu ezingabuyiswanga, kuyimfuneko ukuba zizithabathe kubanikazi, ekubeni ezinye izinto zabantu zizisa amandla angenawo endlwini.
Ngexa uhlambulula indlu, hlaziya yonke into egcinwe kwiifulefu zakho. Ngo-Feng Shui, kunqatshelwe ukugcina izithombe zezilwanyana ezifileyo kunye nabantu, iintyatyambo ezomileyo kunye ne-herbaria. Ngethuba lokuvuna, kufuneka ususe zonke izityalo ezinemiqolo, ukugaya kunye nezinto zokusika. Kwimimandla yothando, ungagcini izityalo ezikhulayo, ngoko unokuphepha ukunyuka.
Vumela ukukhanya kwelanga
Kuzo zonke amagumbi kufuneka uvumele ukukhanya ngakumbi. Ukuxhobisa izixhobo zokuhlamba iifestile, ukuba ilanga liya kukukholisa kunye nenhlanhla yemozulu, ke igumbi liya kugcwaliswa ngamandla emvelo. Yaye wonke umntu ohlala kule ndlu uya kuba nomoya oncomekayo. Ukucocwa ngokubanzi kufuneka kwenziwe kwenyanga ekhulayo. Kwaye inkunkuma yempindezelo ayikho kwicala, apho umnyango wangaphambili ukhona khona, ngoko unokutshutshisa inhlanhla, kwaye usuke ujikeleza ekhompini.
Emva kokuba indlu ihlanjwe yi-feng shui, isindiswe ngothuli kunye nenkunkuma, iphefumule. Kwakhona kufuneka uwasuse amandla amabi kuwe, uyifake xa uhlambulula. Ixesha lokuya kuhlamba.
Jabulela indlela emva kokucoca indlu yakho iya kutshintshwa
Kufuneka ubeke amandla kwaye indlu iya kutshintsha. Imeko yamandla kwindlu iya kuba nenzuzo ebantwini. Ukulala kuya kuphucula, inhlalakahle, imeko yezemali iya kunyuka. Indlu ecocekileyo igcwele amandla akhethekileyo kunye nokukhanya, iphefumula kakuhle, kuyavuya ukuphumla, ukuba kunye nokuqhuba ishishini. Kwindlu ecocekileyo necocekileyo, izibini ezitshatileyo aziqhathanisi ukuxabana, kwaye abantwana bakuyo bakhula bevule. Amandla okulandelwa kunye nokuhlanzeka adluliselwa kubo bonke abantu bawo aze avuke iimvakalelo ezilungileyo kuzo. Kwaye ke ubomi bakho buya kutshintsha kuba ngcono.
Indlela yokuqhafaza nokukhupha imifuno kunye neziqhamo
Indlela yokucoca igolide ngegolide?
Izitya zokucoceka ngokufanelekileyo
Yintoni ekusetyenzisweni kwegalikhi eluhlaza?
Ukunyamekela izityalo zeLitrus
Indlela yokwenza umntwana umhla wokuzalwa
Isaladi kunye ne-sausage, ushizi kunye netamatato
Yintoni eyenzekayo emzimbeni wethu ngexesha lesini?
Yintoni ekucetyiswa ukuba ufunde kubantwana kwiminyaka eyahlukeneyo kwaye kutheni
Ubudlelwane phakathi kwamakhwenkwe namancinci angaphezu kwama-30
Isobho se-Kuku kunye neodle 2
Ikiti yokuncedisa okokuqala kwabasetyhini abakhulelweyo: ubuncinci bafunekayo